Chitupa | BAODING YINGTESHENG BRISTLE UYE Bhurashi KUITA CO., LTD
Sezvo YTS yatanga mumusangano chaiwo wemhuri muBaoding, Hebei mu1990, zvave zvichiona maitiro ehutungamiriri e "Hunhu pamusoro pezvose". Pakutanga, bhizinesi guru reYTS raive rekutengesa bristle yakabikwa, uye munguva pfupi yakazove yega mutengesi weBeijing Brush Fekitori.
Kuti uwane kukwikwidza, YTS yakawana Beijing Brush Fekitori uye nemhando yayo "Great Wall" muna 2016. Mukutsvaga uku, YTS yakaita imwe fambiro mberi inokosha kwete chete mukugadzira michina asiwo mugove wemusika wepamba.
Muna 2005, kuiswa kwetekinoroji nemichina zvakabvumira YTS kuwedzera bhizinesi rayo kupenda bhurashi nzvimbo. Mugore rimwe chetero, YTS yakagadzira dzimbahwe rayo-mugadziri muQingyuan Industrial Park, nzvimbo yepasi peBaoding, Hebei. Inotora pamusoro pe 700,000 mativi emakumbo, akaumbwa nekubikwa bristle kugadzira chirimwa, filament yekuveza chirimwa, kubata kugadzira department, brashi yekugadzira dhipatimendi.
Mushure memakore ekudzidzira, GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi, GB / T 24001-2016 / ISO140001: 2015 sisitimu yezvakatipoteredza yakagadzwa uye yapfuura iyo yepasi rose inogamuchirwa indasitiri chitupa WCA uye SQP.
YTS ine vashandi vanopfuura mazana matatu, kusanganisira vagadziri vehunyanzvi, mainjiniya. Isu tinokwanisa kugadzira zvikamu zvitsva uye zvigadzirwa kupa vatengi nezvakanakisa zvigadzirwa. Isu tine zvakare kukurumidza kuendesa uye mushure-yekutengesa sevhisi yekuwedzera makwikwi edu. Isu tinoshumira vatengi vedu nenzira inoenderana uye nenguva. Chinangwa chikuru cheYTS ndechekuenderera mberi nekugadzira zvigadzirwa zvitsva, kugadzirisa mhando, kudzikisa mutengo, uye kupa zvigadzirwa zvakanakisa kune vatengi nemutengo unokwikwidza kwazvo.
Nei Uchisarudza YTS?!
Kwemakore anopfuura makumi matatu, "mhando pamusoro pezvose" yakagara ichidzidziswa mundangariro dzevashandi. Yedu yemhando yepamusoro mabhurashi anogamuchira inodziya kugamuchirwa kubva kune vatengi pasirese.
YTS ine vashandi vanopfuura mazana matatu vane kugadzirwa kwemakumi maviri emabhokisi emabhasikiti uye mamirioni makumi matatu bhurasho pagore. Mazhinji evashambadzi veYTS vane anopfuura makumi maviri emakore 'ruzivo, vachitora akanakisa mbishi zvinhu nekuvashandura mumabhurashi akanakisa anowanikwa.